Shiinaha CNC mashiinnada qaybo naxaas ah oo yar -yar Warshadaha iyo Warshadda | KORINTA-Elec
Warshadaha farsamaynta waxaa ka mid ah: dabaysha korantada fiilooyinka, goynta laser, ka shaqaynta culus, isku xidhka biraha, sawirka birta, goynta plasma, alxanka saxda ah, sameynta duudduuban, biraha birta qalooca, been abuurka, goynta biyaha biyaha, alxanka saxda ah, iwm. waxaa loola jeedaa habka waxsoosaarka wax soo saarka hab farsamo; Waxay si cidhiidhi ah u tilmaamaysaa geeddi -socodka wax -soo -saarka iyo ka -shaqaynta qaybo leh daloolo, mashiinno wax lagu shiido, mashiinnada qodista, mashiinnada shiidi, mashiinnada shaabadaynta, mashiinnada shubka dhinta iyo qalabka kale ee farsamada.
Mashiinnada loo baahan yahay ka shaqaynta waa mashiinka wax lagu qoro ee dhijitaalka ah, muujinta dhijitaalka ah ee wax -soo -saare, shaashadda dhijitaalka ah, mashiinka EDM, Furimaha, xarunta mashiinka, alxanka laser, socodka siligga dhexdhexaadka ah, iwm. Farsamaynta CNC ee qaybaha saxda ah. Mashiinnada noocan oo kale ah waxay ku fiican yihiin leexashada, shiididda, dhejiska, shiididda iyo ka baaraandegidda CNC ee qaybaha saxda ah, waxayna ka shaqaysiin kartaa qaybo farsamo oo kala duwan oo aan joogto ahayn, oo leh saxnaanta mashiinka ee 2 μ m. Waxa kale oo aad dooran kartaa tikniyoolajiyadda habaynta habboon iyo soo -saarka iyo qalabka wax -qabadka iyadoo loo eegayo shuruudaha saxnaanta kala duwan ee sawirka.
CNC, oo sidoo kale loo yaqaan gong kombiyuutar ama mashiinka CNC, runtii waa magac ku yaal Hong Kong. Later, waxaa lagu soo bandhigay Shiinaha. Xaqiiqdii, waa mashiinka wax lagu qaso ee CNC. Guangzhou, Jiangsu, Zhejiang iyo Shanghai, waxaa ku yaal nooc mashiinno ah oo la yiraahdo "xarunta mashiinnada CNC". Waa teknolojiyad cusub oo makiinado. Shaqadeeda ugu weyni waa diyaarinta barnaamijyada maareynta, taas oo ah, in shaqada gacanta ee asalka ah loo beddelo barnaamijka kombiyuutarka. Dabcan, waxaad u baahan tahay waayo -aragnimo ku shaqaynta gacanta
Mashiinka CNC wuxuu leeyahay faa'iidooyinka soo socda:
① Tirada qalabaynta ayaa si weyn loo yareeyey, qalabaynta adagna looma baahna in lagu farsameeyo qaybo leh qaab adag. Haddii aad rabto inaad beddesho qaabka iyo cabbirka qaybaha, waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad wax ka beddesho barnaamijka ka -shaqaynta qaybta, oo ku habboon horumarinta wax -soo -saarka cusub iyo wax -ka -beddelka.
② Waxay leedahay tayada wax -ka -qabashada deggan, saxnaanta wax -qabadka sare iyo sax -soo -noqnoqoshada sare, waxayna buuxin kartaa shuruudaha habaynta diyaaradaha.
The Marka la eego wax -soo -saarka kala duwan iyo dufcadaha yaryar, wax -soo -saarka wax -soo -saarkiisu aad buu u sarreeyaa, kaas oo yarayn kara wakhtiga diyaarinta wax -soo -saarka, hagaajinta aaladda mashiinka iyo kormeerka habka, oo yarayn kara wakhtiga goynta sababtuna tahay isticmaalka qaddarka goynta ugu fiican.
④ Waxay ka shaqaysiin kartaa sagxadyo adag oo ay adag tahay in lagu farsameeyo hababka caadiga ah, oo xitaa ka shaqaysiisa qaybo ka mid ah mashiinnada aan la eegi karin.
Hore: Adeeg alaab shaabadaynta saxda ah
Xiga: Is -habeynta Heatsink iyadoo loo eegayo codsiga macaamiisha
Is -habeynta Heatsink marka loo eego macaamiisha ...
Alaabta La Soo Bandhigay, Khariidadda bogga, Qaybaha shaabadaynta jumlada, Guga Saxanka, Dhimashada Magnesium, Sheet Birta Stamping Products, Boolal, Aluminium CNC Qaybo Machined, Dhammaan Alaabta